किन कारण छ म्याकोस मोजावेलाई ओपनजीएलको सट्टा धातु चाहिन्छ? | म म्याकबाट हुँ
किन कारण छ म्याकोस मोजावेलाई ओपनजीएलको सट्टा धातु चाहिन्छ?
२०१ 2018 को अन्तिम डब्ल्यूडब्ल्यूडीसीमा म्याकोओएस मोजावेको प्रस्तुतीकरण पछि, दुई सान्दर्भिक सन्देशहरू सारियो: म्याको जसले म्याकोओएस मोजावेलाई समर्थन गर्ने थियो र एप्पलको ग्राफिक्स इञ्जिनको प्रयोगको निर्णयलाई समर्थन गर्ने थियो। एप्पलले ओपनजीएल खन्नेछ र धातुमा फोकस गर्नेछ।
मेटलको पहिलो संस्करणको प्रोग्रामरहरू बीच यसको बत्ती र छाया थियो। यो दोस्रो संस्करण विकासकर्ताको आवश्यकताको लागि बढी तयार छ। तथापि, ओपनजीएलको परित्यागले धेरै विकासकर्ताहरूको प्रतिक्रिया निम्त्यायो जसले म्याकोस को लागी प्रोग्रामिंग जारी नगर्न विज्ञापन गरीयो यदि तिनीहरूले ओपनजीएल छोडे।
अर्कोतर्फ, हामी मोडेलहरू भेट्यौं जसले म्याकोओएस मोजावेलाई समर्थन गर्दछ। म्याक प्रो बाहेक, २०१२ भन्दा पहिले सबै म्याकहरू उप्रान्त समर्थित हुँदैन। द्वारा यी सबैको कारण के हो? मुख्यतया यी मोडेलहरूको GPU को क्षमता।
तर यदि तपाईं एक प्रयोगकर्ता हुनुहुन्न जसले तपाईंको GPU को क्षमता निचोरेर, भिडियो वा फोटोग्राफी सम्पादनको साथ, तपाईंलाई किन हानी भइरहेको छ? उत्तर फेला पारिएको छ कि धातु केवल सम्पादनको लागि प्रयोग गरिएको छैन। केहि अनुप्रयोगहरू जुन म्याकोस मोजावेमा चल्नेछन् एक उपयुक्त जीपीयू र धातु आवश्यक पर्दछ। उदाहरणको लागि, फेसटाइम .5.0.०, बहु-प्रयोगकर्ताको साथ, ग्राफिक्सको कार्यान्वयनको लागि धातु आवश्यक छ।
एप्पल उपकरणहरूमा मेटलको प्रयोग जान्न, हामी आईफोन ss मा फर्कनु पर्छ। Phone 5-बिट संरचनाको साथ पहिलो फोनमा। त्यो संग, एप्पलको उद्देश्य सीपीयू लोड घटाउन सफ्टवेयरको साथ जीपीयू लोड अनुकूलन गर्ने हो। वास्तवमा, नाम धातुले यो प्रतीकको रूपमा खोजी गरेको छ कि आवश्यक पर्ने कामको बोझ उपचारको अघिल्लो चरणमा रहन्छ, यस अवस्थामा, खुला, अविकसित, लगभग कुमारी धातुमा।
यी सबैका लागि, एप्पल द्रुत ओराजी थ्रीडी छोडे पछि स्टीभ जॉब्सले to ० को दशकको अन्तमा जनतामा देखाउँदा ड्रपमा ओपनजीएल छोड्न इच्छुक छ। केमा मकोस आउन बाँकी छ मोजावे मेटल २ हो। मुख्य उपन्यासहरू हुन् मेशिन शिक्षा र संवर्धित वास्तविकता मार्फत प्रक्रियाहरू र नवाचारको सुधार।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » हाम्रो बारेमा » किन कारण छ म्याकोस मोजावेलाई ओपनजीएलको सट्टा धातु चाहिन्छ?
स्वास्थ्य जाँचको साथ तपाईको बिरामीहरूको स diagnosis्केतात्मक निदान पाउनुहोस्
सबै एप्पल स्ट्रिमि content सामग्रीको लागि एकल सदस्यता